Guri iib ah, Guri kiro ah, Boos ganacsi ka hel Guri.so
Guryo iib iyo kiro ah
Guri kiro ah Bosaso
Guri kiro ah Bosaaso 3 qol oo hurdo ah, 2 musqul iyo jiko gaar ah.
Guri Kiro ah. oo aad U quruxbdan . Waxa Uu ku yaalaa Degmada Hodan, km5 Zobe. waxa uu ka kooban yahay:- 10-Qol ,qol waliba waxa uu leeyahay suuli u gaar ah. 2-service room 1-Howl wayn oo ugu yaraan 50 qof lagu qaabil karo parking uga yaraan 6 Gaari iyo ka badan Qiimaha waa: 4000 dollar…
Apartments Kiro ah
Waa Guri dabaq cusub, waxaa ka banaan labo Apartments, waxay Apartments walba ka kooban tahay 4 Qol, 3 Musqul iyo Kushiin. Wuxuu Gurigu leeyahay Parking weyn iyo Barxad lagu nasto. Qiimaha kirada bishii waa $800. Faah faahinta, Kala soo xariir shirkada Kirosom Real Estate Solutions oo kuu hayso Guryo iyo Ganacsiyo Kiro ah. Nagala soo…
Muqdisho, Somalia City: Mogadishu
Shirkada Goosaar property waxa ay macamiisheeda u heesa guri iib ah leh dhismo cusub. Goobta: Muqdisho, Wadajir, Buulo xubey Cabirka: 13x13M2 Qiimaha: $150,000 Naga soo wac : 0615926648/0623337778 E-mail:- goosaar2014@gmail.com
Waa Guri deegaan ah oo ka kooban 5 Qol, 2 Musqul, Kushiin iyo Parking Baabuur, kuna yaala Xaafada Suuqa Ceel-dheere, Degmada Dharkeynley. Waa Guri leh Documents saxan. Cabirka Guriga waa 10x20m2. Qiimahana waa $65,000 iyo Heshiis. #Tel: 0612 922 242 / 0612 922 241 Info@Kirosom.com / www.kirosom.com
hirkada Goosaar Property waxa ay macamiisheeda u heesa guri kiro ah. Goobta: Wadajir, Buulo xubey Gurigan waa guri dabaq ah qeybta hoose 4 qol, labo musqul, jiko, qeybta kore waxba kama dhismo waa dhul banaan oo shub ah. Naga soo wac:0615926648/0623337778 E-mail:- goosaar2014@gmail.com
Goobta: Degmada Wadajir, Buulo xubey Qiimaha: $550 Gurigan waa guri dabaq ah qeybta kore waxa ka dhisan 5 qol 2 musqul iyo balakoon, barxad, qeybta hoose waxa ka dhisan 4 qol 3 musqul jiko iyo baakin hal gaari ah. Naga soo wac:0615926648/0623337778 E-mail:- goosaar2014@gmail.com
Waa Guri dabaq ah oo ay ka dhisan yihiin #6_Qol, #5_Musqul, #Jiko, #Mudul, iyo #Qolal_Service_ah iyo #Parking_weyn. Wuxuu kuyaalaa agagaarka wadada aada #Xeebta_Liido ee #Degmada_Abdiaziz. #Qiimaha waa $1,500 iyo Heshiis. #WhatsApp, #Viber & #IMO: ☎️ +252 (0) 612 922 241 / 0612 922 242
Degmada Hodan Waa Guri Apartment Goglan oo cusub, Apartments walba waxay ka kooban tahay #2_Qol_Jiif_ah, #Qol_Fadhi_ah, #2_Musqul iyo #Kushiin iyo #Parking Baabuur. #Qiimaha_Kirada Bishii waa ???? $600. #WhatsApp, #Viber & #IMO ☎️ 0612 922 241 / 0612 922 242
Goobta: Degmada Wabari, Via Laberia Qiimaha: $400 Waa guri ka kooban 5 qol labo musqul jiko iyo baakin gaari ah oo kuwa raaxada ah. Naga soo wac: 0615926648/0623337778 E-mail:- goosaar2014@gmail.com
Shirkada Goosaar Property waxa ay macamiisheeda u heesa guri kiro ah. Goobta: Degmada Wadajir, Xaawo taako Qiimaha: $300 Gurigan waxa ka dhisan 5 qol, 2 musqul jiko iyo baakin hal gaari ah laamiga waxa ka xiga 4 boos kaliya. Naga soo wac:0615926648/0623337778 www.goosaarproperty.com E-mail:- info@goosaarproperty.com
Shirkada Goosaar Property waxa ay macamiisheeda u heesa guri kiro ah. Goobta: Degmada wadajir, Korontada Qiimaha: $350 Gurigan waa guri filo oo hada la dhisay waxana ka dhisan 5 qol 2 musqul jiko, iyo baakin hal gaari ah. Naga soo wac: 0615926648/0623337778
Shirkada Goosaar Property waxa ay macamiisheeda u heesa guri kiro ah. Goobta: Hodan, Kpp Qiimaha: $350 Gurigan waa guri dabaq qeyb hoose waxa ka dhisan 3 qol 2 musqul jiko, qol ka mid suuli ayuu leeyahay. Naga soo wac: 0615926648/0623337778
Shirkada Goosaar Property waxa ay macamiisheeda u heesa guri kiro ah. Goobta: Wadajir, Buulo xubey Qiimaha: $500 Gurigan waa gyri filo ah, waxa ka dhisan 4 qol 3 musqul, jiko qol ka mid ah ayaa muqul leh, sidoo kale waxa uu leeyahay baakin hal gaari ah. Naga soo wac: 0615926648/0623337778
Shirkada Goosaar property waxa ay macamiisheeda u heesa guri iib ah. Goobta: Wadajir, Xaawo taako Cabirka: 20x10M2 Qiimaha: $110,000 is raac ah Gurigan waxa ka dhisan 5 qol, 2 musqul jiko iyo baakin hal gaari ah laamiga waxa ka xiga 4 boos kaliya, warqadaha gurigan waa kuwa sax ah. Call us: 0615926648/0623337778
Shirkada Goosaar Property waxa ay macamiisheeda u heesa guri kiro ah. Goobta: Wadajir, Madiina gate Qiimaha: $1,500 Gurigan waa guri dabaq qeyb kore iyo qeyb hoose, qeybta kore waxa ka dhisan 3 qol 2 musqul qol ka mid suuli ayuu leeyahay. Qeybta hoose waxa ka dhisan 4 qol 3 musqul jiko waxaana lagu xareyn kara…
Shineemo Equitor, KM4, Mogadishu, Somalia
Waa Apartment ka kooban #4_Qol, #2_Musqul, #Kushiin iyo #Parking Gaari, wuxuu kuyaalaa dhabarka danbe shineemo Soomaaliya ee #Degmada_Waaberi. #Qiimaha Kirada bishii waa ???? $450. #WhatsApp, #Viber & #IMO: ☎️ 0612 922 242 / +252 612 922 241
Brand new 3 bedroom apartment. 4 apartment available to rent Each apartment has bathroom, built in water heater, Anti fungal paint, Electric RCD -Washroom -European standard built -2 Balcony -Green Zone TELEPHONE: 0617122019
Guri #VIP Kiro Ah
Xalane, Borama, Somalia
Waa Guri Dabaq weyn oo cusub, kana koban sadex biyaano oo leh 7 Qol, 7 Musqul, 3 Hall, Kushiin, 2 Qol iyo Musqul Service ah, 5 Store iyo Parking weyn. Wuxuu ku yaalaa agagaarka xalane Gate kuna dhow Xerada #TurkishSom ee Degamada #Wadajir. Cabirka Guriga waa 40x40m2. Qiimaha Kirada Bishii waa ????$3,500 iyo #Heshiis. #WhatsApp, #Viber…
Guri iib ah Garowe⁸
Iibi Kiree guri, dhul ama meherad
Waxaa si fudud u iibin kartaa guri, goob ganacsi, dhul. Amaba kiree xafiis, guri, meherad ama hoteel.